Hetsika Taom-baovao: Ny Disney's Resort dia tonga ao amin'ny Disneyland Resort
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hetsika Taom-baovao: Ny Disney's Resort dia tonga ao amin'ny Disneyland Resort
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Hotels & Resorts • Vaovao • Fandefasana gazety • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny Disneyland Resort dia misy zaridaina roa lohahevitra - Disneyland sy Disney California Adventure Park - miampy hotely telo sy ny Downtown Disney District.
Disneyland Resort dia manolotra ny Year of the Mouse amin'ity taom-baovao ity ao amin'ny Disney California Adventure Park, 17 Janoary ka hatramin'ny 9 feb 2020. Mandritra ny 24 andro amin'ity fankalazana kolontsaina marobe ity, ny vahiny dia hankafy fialam-boly mivantana sy fampisehoana mozika, ao anatin'izany ny “Mulan's Lunar New Year Procession” ary ny fiverenan'ilay “Hurry Home - Fankalazana ny Taom-baovao” izay manafana ny fo alohan'ny "World of Colour" mahatalanjona amin'ny alina.
Ity fankalazana ny Taom-baovao ity dia velona miaraka amin'ny majika Disney rehefa mankalaza ny taona vaovao ny fankalazana aziatika mampiova. Ny vahiny dia hiaina sakafo ara-tsindrimandry, mozika ary fialamboly miaraka amin'ny olon-tiany rehefa miara-mankalaza ny Taonan'ny Mouse izy ireo. Taom-baovao, nankalazana tamin'ny fomba nentim-paharazana tao anatin'ny kolontsaina sinoa, koreana ary vietnamiana, mankalaza ny dia any an-danitra sy ny volana amin'ny diany mandritra ny taona iray hafa. Misongadina ao amin'ny fankalazana ny taom-baovao eo amin'ny Disney California Adventure ny:
“Diarin'ny Taom-baovao any Mulan” dia matso fankalazana notarihin'i Mulan izay manaja ny Taom-baovao ary manokana ny fitahian'ny taona vaovao ho an'ny fianakaviana sy ny finamanana. Amin'ny maha-fitsaboana manokana amin'ny taom-pilalaovana, Mickey Mouse ary Mouse Minnie midira amin'ny filaharana amin'ny akanjo fankalazana vaovao, miaraka amin'i Goofy amin'ny akanjo “andriamanitry ny Harena Tsara” sy Chip 'n' Dale amin'ny akanjony mena. Ireo mpanakanto manan-talenta dia mitondra dihy, haiady ary ady amponga mba hanatsarana ny filaharana miloko mahafinaritra. “Mulan's Lunar New Year Procession” dia hiasa imbetsaka, isan'andro.
Ny «Hurry Home - Fankalazana ny Taom-baovao» dia fampisehoana rano mampientam-po ao amin'ny Paradise Bay talohan'ny "World of Color" izay mitantara ny fikatsahan'ny fanilo kely hiaraka amin'ny fianakaviana ho an'ny fankalazana ny vintana sy ny harena isan-taona. Faly ireo vahiny mahita an'i Mulan ho anisan'ny dian'ny lantern kely.
Tarehin-tsoratra malala Mickey Mouse ary Mouse Minnie hanome akanjo vaovao amin'ny fetin'ny volana vaovao amin'ity taona ity rehefa miarahaba ny vahiny ao amin'ny Paradise Gardens. Ny mpandray anjara hafa mety ho hitan'ny olona amin'ity faritra ity dia ahitana an'i Mulan, Pluto, ary ny Three Little Pigs izay mandray anjara amin'ny fankalazana ny taom-baovao koa.
Hankafy tsena efatra fety ireo vahiny mba hiaina sakafo mahafinaritra sy zava-pisotro entanin'ny kolontsaina sinoa, koreanina ary vietnamiana, ao anatin'izany ny henan'omby fohy voatoto bulgogi fohy sy ny peach sojito, ary koa ireo tiana vaovao sy miverina maro hafa. Ny pass Sip sy Savor * malaza * dia azon'ny vahiny vidina raha maniry ny hahazo ny sarany tsara indrindra izy ireo rehefa manandrana mamaky ny tsena aziatika fety.
Lucky 8 Fanala
Fambobiana Bao & Buns
Mpivarotra zava-manitra mena dragona
Ny menio manokana iray an'ny volana vaovao ao amin'ny Paradise Garden Grill dia manolotra zavatra nentanin'ny vidin'ny nentim-paharazana aziatika, miampy ny Cart amin'ny Festival ao anatin'ny Paradise Gardens sy ireo safidy sakafo manokana ao amin'ny Lucky Fortune Cookery any Pacific Wharf.
Fampisehoana mivantana, isan'andro ataon'ireo mpandihy sy mpitendry sinoa marina, koreanina ary vietnamiana izay hatao manerana ny Paradise Gardens Park.
Ankafizo ireo faritra ho an'ny vahiny manandrana zava-kanto sy asa tanana. Ny faritra iray dia misy asa-tanana fandokoana perla an'ny dragona, ary misy kosa ny calligraphy sinoa miaraka amin'ireo mpanao asa tanana ao an-toerana. Fanampin'izay, nanampy ny sary hosodoko tarehy vaovao tamin'ny fankalazana ny taom-baovao, azo vidiana.
Ny rindrina Lucky Wishing, miorina ao amin'ny Paradise Gardens, dia toerana ahafahan'ny vahiny manoratra firariana sy mamatotra azy ireo amin'ny rindrina amin'ny fanantenana ho avy miroborobo.
Ny rindrin'ny kanto fanabeazana dia manome vaovao ho an'ny vahiny momba ny festival, ao anatin'izany ny antsipiriany mahafinaritra toy ny “What Year Are You?” ary koa ny tantara tokana amin'ny Taom-baovao isaky ny kolontsaina mankalaza ny fetin'ny masoandro sy ny volana.
Ny haingon-dahatsoratry ny taom-baovao dia manome lanja vintana, harena ary fahasambarana amin'ny volamena mena sy mamirapiratra. Ireo vahiny dia hahita jiro fanaovan-jiro sy sora-baventy maniry ny fitsingerenan'ny volana vaovao amin'ny fiteny anglisy, sinoa, koreanina ary vietnamiana ho an'ny vahiny.
Entam-barotra vaovao amin'ny volana vaovao nentanin'ny kolontsaina samihafa Azia Atsinanana ho vidiana. Amin'ity taona ity, ny vahiny dia hahita jirofo ara-panahy vaovao, tarehin-doha bobble loha miaraka amin'i Chip sy Dale, valopy mena nentim-paharazana, misy lohahevitra Mouse Minnie fehiloha sofina ary maro hafa.
Ho fanampin'izany, ny Disneyland Resort dia manolotra tolotra hotely manokana mandritra ny fankalazana ny Taom-baovao, izay fotoana mety indrindra itsidihan'ny vahiny ny Disney California Adventure. Mety hahita fampahalalana bebe kokoa ny vahiny amin'ny Disneyland.com
Raha te hamaky bebe kokoa momba ny fitsidihan'ny Disney Resorts Eto.